Akhri-Document: Gobolka Oslo oo go´aan kasoo saaray kiiska masaajidka Tawfiiq. - NorSom News
Akhri-Document: Gobolka Oslo oo go´aan kasoo saaray kiiska masaajidka Tawfiiq.
Xafiiska gudoomiyaha gobolka Oslo ayaa maanta oo khamiis ah soo saaray go´aan ku saabsan khilaafka mudada soo socday ee ku saabsan maamulka masaajidka Tawfiiq, kaas oo sababay in dowladu ay hakiso taageeradii dhaqaale ee masaajidka la siin jiray. Hoos ka akhri warqada go´aanka oo af Norwiiji ku qoran.
Xafiiska gudoomiyaha gobolka Oslo ayaa go´aankooda ku sheegay in qiimeyn kadib ay garwaaqsadeen in masaajidka Tawfiiq uu buuxiyay dhamaan shuruudihii lagu xiray si loogu diiwaangaliyo masaajid ahaan. Taas oo meesha ka saareyso digniintii aheyd in masaajidka laga tirtiriyo liiska ururada diiniga ah ee dowlada u diiwaangashan.
Shuruudaha gobolka ay masaajidka ku xireen ayaa kala ahaa: Gudi uu masaajidku leeyahay, xeer la isku waafaqsanyahay iyo inay keenaan cadeymaha wadashaqeynta iyo is weydaarsiga maaliyadeed ee ururka masaajidka maamulka iyo ururka masaajidka dhismihiisa ku qoran(Waqafka). Gobolka Oslo ayaa go´aankooda cusub ku sheegay inay arkaan in masaajidku uu buuxiyay intii ugu yareyd ee laga rabay inuu ka buuxiyo shuruudihii lagu xiray.
Xafiiska Gobolka Oslo ayaa sheegay in iyaga cuskunayo go´aankii maxkamada Oslo ay gaartay bishii Juni ee sanadkan 2020, ay ka noqdeen ama meesha ka saareen digniintii aheyd in masaajidka laga tirtiro liiska ururada diimaha ee dowlada dhaqaalaha ka helo, bixina kara adeegyada diiniga ah.
Qodobka ugu weyn oo ay gobolka Oslo go´aankeeda u cuskadeen ayaa ah in mid kamid ah labadii gudi ee isku heystay awooda masaajidka ay maxkamada horteeda ka sheegeen in aysan aheyn gudi sifo sharci ah lagu doortay, balse ay yihiin xubno masaajidka katirsan oo kasoo horjeedo qaabka masaajidka loo maamulo. Halka gudiga kale ay sheegeen in lasoo doortay oo xubnaha masaajidku ay doorteen. Go´aanka maxkamada Oslo ayaa sabab u ahaa in la diiwaangaliyo gudiga masaajidka hada maamulo, kaas oo markiisii hore la doortay November 2018, balse hey´addaha dowlada laga diiwaangaliyay January 2020.
Labada guruuba ee is haya ayaa dhanka kale maxkamada horteeeda isku waafaqay in masaajidku uu leeyahay xeer la ansixiyay sanadkii 2019. Balse waxaa muran xoogan uu ka taagnaa qaabka iyo xiliga ay xeerarka cusub ku dhaqangalayaan.
Majirto sabab aan kusii heysano lacagta masaajidka:
Xafiiska gobolka Oslo ayaa go´aankooda ku xusay in maadaama ay arkeen in masaajidku uu ilaa xad buuxiyay shuruudihii lagu xiray, aysan jirin sabab ay u heystaan lacagtii taageerada dhaqaale aheyd ee masaajidka laga hakiyay labadii sano ee ugu danbeysay. Iyaga oo go´aankooda ku sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u bilaabi doonaan ka shaqeynta codsiga soo sii deynta dhaqaalihii masaajidka laga hakiyay labadii sano ee ugu danbeeyay. Lacagta ay dowladu ka hakisay masaajidka ayaa gaareyso ilaa 16 milyan.
Gobolka Oslo ayaa sidoo kale cadeeyay inay wali arkaan khilaaf xoogan oo masaajidka ka jiro, ayna aad ugu xunyihiin sida ay arintu usii xoogeysatay mudooyinkii ugu danbeeyay. Waxeyna labada dhinac ka codsadeen inay dhexdooda heshiiyaan ama gaaraan xal dan u ah xubnaha masaajidka iyo labada dhinac ee ishayaba.
Halkan ka akhri warqada uu gobolku kasoo saaray go´aanka TawfiiqLast ned
Previous articleDowlada oo qorsheyneyso inay mar kale kordhiso lacagta caruurta.
Next articleLabo dumar soomaali ah: Qaniinyo ayay farta kaga goysay: Sanad xabsi ah iyo magdhow ayaa lagu xukumay.